त्यो च्वाँक केटी : कथा | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
त्यो च्वाँक केटी : कथा
प्रकाशित मिति १९ माघ २०७५, शनिबार १३:४० लेखक nepali janta
उसले कलङ्की चोकतिर देखाउँदै भनी– ‘त्यही ! नजिकै हो, भाइ आउँछ लिन ।’अब गफिने बहाना सकिए । मलाई उकुस–मुकुस भयो । के बोलौँ, के भनौँ भयो । सडकमै सटाएर राखेको एउटा ठेलामा एकजना अन्टी चिया बेच्दै हुनुहुन्थ्यो । मैले जाडो भएको महसुस गर्दै भनँे– ‘चिया पिउने ? भाइ आउँदासम्म ।’
सुरु भयो यतै म्यासेन्जरमा गफ, आधी रात चल्दासम्म भइरहे गफ । कहिले मीठा कहिले तीता । भोलि भेट्ने जिद्दी मैले गरे, मिलेसम्म भेट्ने बाचा उसले गरी अनि हामी सुत्यौँ । VIA ratopati.com
अबको बाटो बेरोजगारी अन्त्य : माधव नेपाल
भक्तपुर । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अबको एकमात्र बाटो बेरोजगारी अन्त्य भएको बताएका छन् ।
भक्तपुरको सरस्वती खेलमा शुक्रबार…
इन्टरपोलले आतंककारी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको डाटा नेपालको अध्यागमन संयन्त्रसँग नजोड्दा सुरक्षा चुनौती !
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीहरूको संगठन (इन्टरपोल) ले आतंककारी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न…
रेलमार्गको अनुगमन गर्न भारतीय टोली आएन, के हुन्छ रेल कुदाउने सपना ?
बाँके । रुपैडियादेखि कोहलपुरसम्मको रेलमार्ग निर्माण अध्ययनका लागि आउने भनिएको भारतीय रेल विभागका कर्मचारी सोमबार साँझसम्म नेपालगन्ज आएका छैनन् ।
चिसोले लग्यो दुइको ज्यान
राजविराज । विगत चार-पाँच दिनदेखि चलेको शीतलहर र चिसो हावाका कारण…
मानसराेबर गएका १६ सयभन्दा बढी भारतीय तिर्थयात्री हुम्लामा अलपत्र (अपडेट)
काठमाडाैँ । मानसराेबर गएका १ हजार ६ सयभन्दा बढी भारतीय तिर्थयात्री अलपत्र परेका छन् । अाइतबारदेखि लगातार परेकाे पानीका…